Indlu kwiiNtaba-Vale dos Contos - I-Airbnb
Indlu kwiiNtaba-Vale dos Contos
Piracaia , São Paulo, Brazil
Igumbi lakho lokulala e indlu esehlathini okanye ezintabeni sinombuki zindwendwe onguSuzy
IVale dos Contos yindawo yokuhlala ehambelanayo kwindalo echulumancisayo egcinwe ezintabeni, ecaleni kwe-EcoVila Clareando, kwingingqi edume ngezifundo ezigxile kwizihloko ezifana nePermaculture, Agroforestry, Integral Health, Bioconstruction kunye nobugcisa obuninzi.
Sibekwe kwindawo ekufutshane neSerra da Mantiqueira, phakathi kwesixeko sasePiracaia kunye neJoanópolis, kwiLizwe laseSão Paulo, kwindawo yamadama, sinethuba lokuziqhelanisa nemidlalo yasemanzini, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela intaba, ukubhabha kunye nokutyelela iingxangxasi. .
Ukujonga iintaba, ukuphakama kwayo kungaphezulu kweemitha ezili-1000.
Yi-1: 30h kunye ne-85 km ukusuka eSão Paulo, i-36 km ukusuka eBragança Paulista kunye ne-98 km ukusuka eCampinas.
Ngaphakathi kweVale dos Contos uya kufumana:
Ndwendwela indawo yokuthengisa iwayini kunye nokungcamla iwayini yeziqhamo eveliswe kwindawo yenani elincinane labantu.
Indawo yeLake: Indawo yeParadisi, enoxolo kwaye intle. Ngokunokwenzeka kokuloba kwezemidlalo okanye uthabathe kwaye uhlawule; ipiknikhi kunye nendawo yesiganeko.
Iiorchids: Sinendlu entle yeeorchids esityelelwa kuyo ngamaxesha athile.
Iapiary: Imveliso yendawo yobusi obuphilayo obuthengiswa kwivenkile yethu.
Ukuthengiswa kwezinto eziveliswe sithi apha, ezifana ne: iiwayini zeziqhamo, iijam, ubusi, iziphuzo zeprobiotic (i-Ginger Ale; i-soda ye-Kefir kunye ne-Hibiscus) njl.
ICachoeirinha: Sikwindawo egciniweyo yendalo enemithombo emininzi. EVale dos Contos, sinomlambo omncinci, amachibi kunye nengxangxasi encinci.
Ikhitshi lemizi-mveliso: Ukubanakho ukuqesha ikhitshi lemizi-mveliso ukulungiselela imisitho.
Ngaphakathi kwiNdawo yethu siqeshisa iNdlu ekwiiNtaba, iLoft yaseMaphandleni, i-Master Loft, i-Recanto, eyi-duplex ekhululekileyo nebanzi, ukongeza kwi-Rural Suite.
Ngenxa yokhathalelo lwethu lolondolozo lwendalo esingqongileyo, sizibophelele ekubeni singazihlambi iindawo zokuhlala apha. Ngoko ke, iindwendwe kufuneka zizizise.
Iintsuku eziyi-7 e Piracaia
Umbuki zindwendwe ngu- Suzy
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Piracaia